Ukudibanisa Imibutho - Umxholo we-Geomatics we2016 International IT Fair - Geofumadas
Idibanisa bentlalo - Geomatics isihloko for International Computer Fair 2016
NgoJulayi, 2015 Ukufundisa i-CAD / GIS, ezintsha
Siyavuya ukwazisa ukuba iKomiti yokuLungelelanisa ye-IX International Congress ye-GEOMATICS 2016 ibhengeze isikhokelo se-XVI Convention kunye ne-International Fair yeKhompyutha kunyaka olandelayo.
Lo msitho uza kwenzeka e-Havana ukusuka nge-14 kaMatshi ukuya kwi-18 ngomxholo ophakathi.Umbutho oDibeneyo«.
Phakathi kwezihloko eziya kuqwalaselwa eGeomática 2016 zezi:
1. Imfundo noqeqesho kwi-Geomatics.
Uqeqesho lobugcisa kubuGcisa beGeomatic (iiNkqubo zeSifundo). Iindlela, iindlela ezizezinye kunye namava kwimisebenzi yokuthwesa isidanga (iidiploma, iiMasters, iiGqirha). Uphuhliso lwezixhobo zokufundisa kusetyenziswa ii-ICTs zoqeqesho lobungcali kwi-Geomatics. Imigaqo-nkqubo yeziko yoqeqesho kwi-Geomatics. Ukufundiswa kweeGeomatics kwasebusheni. Amava kwicandelo le-Geomatic Education. Ukuveliswa kwedatha kwizicelo zeGeomatic kwicandelo lezixhobo zendalo kunye nokusingqongileyo.
2. I-Geodey kunye neTowudi eTyhidiweyo.
Iitekhnoloji zolwazi, iinkqubo zokuma komhlaba kunye nonxibelelwano. Iinkqubo zokufumana i-Geoprocessing kuphando lwe-topographic nge-GNSS kunye neZikhululo zeTotali. Ukuphuhliswa kweeNethiwekhi zee-Geodetic kunye neeNethiwekhi ezikhethekileyo. Izitishi kunye nenethiwekhi ezingapheliyo ze-GNSS (Cors). Ukuveliswa kunye nokusetyenziswa kweeModyuli zeDijithali zeThala. Uyilo lweemodeli ze-geoid. Ukumodareyitha kwamanani ukusuka kwimilinganiselo ye-geotechnical kunye ne-geodetic. Injineli yeGeodey. IiTekhnoloji zoLwazi kunye noNxibelelwano kwicandelo le-Geomatic kunye neTekhnoloji yeTekhnoloji. Imigaqo malunga nokubekwa kweenkonzo.
3. ICadastre, iiNkqubo zoLwazi zeCadastral.
Itekhnoloji yokuyila imephu ye-cadastral yedolophu ngokusetyenziswa kwemifanekiso yeeNkqubo eziSetyenzisiweyo ze-Aerial (VANT). Iinkqubo zedatha yeCadastral yolwakhiwo lwedolophu nolwasemaphandleni.
Iindlela zokuvuselela i-cadastral. Ukuphuhliswa kolwazi lwe-cadastral. Ukuvelisa iimephu ezinobunkunkqele kwiinkcukacha zedatha yecadastral kusetyenziswa iindlela zobuchule ngokubanzi. Uxabiso lweCadastral lwepropathi.
4. Iikhathuni zeKhathuni kunye nokuHanjiswa kweSithuba.
Iitekhnoloji kunye noMbutho woNcedo lweSizwe lweKhathuni. Iingxelo zeNdalo. Ukudityaniswa kwe-Cartographic. Idatha kunye neemodeli zokudibanisa iMetadata. Ukuphuhliswa kwezixhobo zokuchonga idatha. Iimodeli zedijithali kwi3D, esetyenziswa yiLiDAR. I-teknoloji yeVAN yeenjongo zekhathuni. Ukufikelela kulwazi kunye nokukhusela idatha. Umbutho weeFayile zeDijithali. Imigangatho yezobugcisa kumgangatho wemveliso ye-cartographic. Ukuziphatha, urhwebo lwe-elektroniki kunye ne-Geomatics. I-ICTs kunye nokuveliswa kwexabiso elongeziweyo kunye nomsebenzi wenkonzo.
5. Ukubonwa okukude kunye ne Phot Photmetmetry.
Iitekhnoloji zokufaka idatha yejogatial ngesakhelo sedijithali kunye neekhamera zevidiyo, zidityaniswa nezinye izinzwa ezixhaswayo kwizithuthi ezingafakwanga zomoya (VANT). Ukuphuhliswa kwetekhnoloji yokuqhubekiswa kwemifanekiso ye-angile nesathelayithi ukuze kudalwe kunye nokuhlaziywa kweTopographic, Cadastral kunye neMephu yeThematic kwiifomathi ezibalaseleyo kunye nefomati. Ukufakwa komfanekiso kunye nokulungiswa kunye neendidi ezahlukeneyo zeenzwa. Ukuphuhliswa kweeprojekthi ezijolise kwizicelo zejomatic. Ukusetyenziswa kwemifanekiso yesatellite kunye ne-eriyeli yesizukulwane semveliso yekhathuni ngeenjongo ezahlukeneyo.
6. Izifundo zasemanzini.
Iitekhnoloji zokwenza kunye nokuhlaziya iitshathi zomkhosi waselwandle. Iinkqubo zophando kunye ne-hydrographic, i-Oceanographic kunye ne-geophysical process. Ukuveliswa koonobumba be-elektroniki. Ukudityaniswa kweemodeli zokulinganisa. Ukuhanjiswa kwendlela yaselwandle kunye neenkqubo zokubeka iliso ezizenzekelayo. Iifomathi zomgangatho zotshintshiselwano lwedatha ye-hydrographic.
7. Izibonelelo zeDatha yeendawo kunye ne-GIS.
Ubudlelwane boLwakhiwo lweDatha eyiSpatial noRhulumente, uMveliso kunye nabemi. Imeko yangomso yoLawulo loLwazi lweJografi. Isiseko nesisetyenzisiwe sophando kwii-IDEs. Uvavanyo lwe-IDE. Amava e-IDE kunye nezifundo zamatyala. Ulawulo lolwazi lwendawo. I-Geospatial Business Intelligence (GeoBI). Ukuthengisa iimpahla Idatha edityanisiweyo ye-Geospatial kunye ne-Geospatial Semantic Web. I-GIS kulawulo lwenethiwekhi. I-GIS kwiWebhu. Izicelo ezibuthathaka zeselula kunye nemeko. Idatha enkulu ye-Geospatial.
8. I-Geomatics kuxhomekeka kwindalo esingqongileyo kunye noKhenketho.
Ukubuzwa kweLizwe ekude kunye neNkqubo yoLwazi lweJografi kusetyenziswa kwisifundo semo engqongileyo. Imephu zokusingqongileyo. Ikhathuni yekhathuni yomngcipheko kunye nezixhobo zendalo. Iinkqubo zokulawulwa komngcipheko kunye nenkxaso yokuthatha izigqibo xa ujongene nentlekele yendalo. Izisombululo zejometri zisetyenziswa kukhenketho.
Ziya kuqhutywa ukongeza Iingqungquthela eziPhambili kunye neNdibano yokusebenzela ngaphambi kweCongress Ngeenjongo zokubonelela ngotshintshiselwano phakathi kweengcali ezahlukeneyo ze ngaphezulu kwamazwe e-30 leyo iya kuba yinxalenye I-GEOMATIC 2016. Ngendlela efanayo ebalulekileyo iya kwenzeka iintlanganiso zeshishini ngaphakathi kobume be- Umboniso Fair
Ulwazi oluthe kratya luya kubonelelwa kwiSetyhula 3ra nakwiwebhusayithi ye-IT www.informaticahabana.com o www.informaticahabana.cu
IMIHLA EBALULEKILEYO: Ingqungquthela
· Ukunikezelwa kwengcaciso ngemiboniso yoqhawulo-mtshato kunye neenkcazo-ntetho
· Isaziso sokwamkelwa: ngoNovemba 20 usuka kwi2015
· Ukungeniswa komsebenzi wokugqibela wokupapashwa: 7 Disemba 2015
Izicelo zeesampulu zemiboniso: kude kube yi-28 kaJanuwari ye2016
Isaziso sokwamkelwa kweesampulu zemiboniso: kude kube yi-18 yangoFebruwari we2016
Post edlulileyo«Edlulileyo Ngenisa i-OpenStreetMap idatha kwi-QGIS
Post Next Iimephu ze-25,000 emhlabeni wonke ziyafumaneka ukukhuphelaOkulandelayo "